उत्तर चिहान, सेन्ट पीटर्सबर्ग योजना, ठेगाना, समीक्षा
उत्तरी चिहान सेन्ट पीटर्सबर्ग को बासिन्दा बीच धेरै लोकप्रिय छ। धेरै मानिसहरू उहाँलाई प्राप्त गर्न कसरी आश्चर्य। यो धेरै सरल छ: तपाईं Pargolovo भनिन्छ रेल स्टेशन प्राप्त गर्न आवश्यक र त्यहाँबाट बस नम्बर 398, जो आफ्नो गन्तव्यमा तपाईंलाई लिन। क्रममा सवारी साधनको बाहिर आ नष्ट गर्न, तपाईं घन्टी सडक चिहान को एक छेउमा कि जान्नु आवश्यक छ, र अन्य मा - सडक 1st धारणा। जहाँ हुन थियो थिएन एक अनौठो ठाउँ, पाउन केही गाह्रो। सेन्ट पीटर्सबर्ग - यो चिहान ठ्याक्कै कहाँ छ धेरै मान्छे थाहा छैन हुनत, यो उत्तरी चिहान मा स्थित छ जो कि शहर, को पाठ्यक्रम मा अन्य बसोबास मानिसहरूलाई त पनि, एकदम चिरपरिचित छ। योजना तपाईंलाई यो स्थान को आन्तरिक संरचना थाह प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
काम र यसको ठेगाना मोड
जनवरी 1st बाहेक, कुनै पनि महिना र दिन मा चिहान आउन। मई देखि सेप्टेम्बर, यो मा 9:00 खुल्छ र 18:00 मा तल बन्द। एक सानो विभिन्न अक्टोबर र अप्रिल बीच अवस्था हो। यो समयमा, यो एक घण्टा पहिले बन्द गर्छ। सेन्ट पीटर्सबर्ग - जो तपाईंले चाहेको शहर उत्तरी चिहान भ्रमण आउन भन्न अनावश्यक? ठेगाना तैपनि सधैं गाउँमा को नाम संग सुरु हुन्छ। मे 1, 1 - सडक ठेगाना द्वारा पछि लागे।
को चिहान मैदान को इतिहास
यो चिहान अघि केही समय काम गर्न थाले। 1861 मा भयो कि सुधार को परिणाम, उत्तरी राजधानी को जनसंख्या नाटकीय वृद्धि भएको छ रूपमा यो आवश्यक भएको छ। अर्को कारण शहर को बासिन्दाहरूलाई संख्या मा वृद्धि किन - serfdom को उन्मूलनको छ। तर चिहान षड्यन्त्र छैन एकैचोटि विनियोजन भएको थियो, यो त कसरी चयन गर्न उपयुक्त स्थान एकदम गाह्रो थियो, धेरै समय लाग्यो। निर्णय मात्र 1874 मा गरिएको थियो। यो त थियो चिहान भूमि को एक भाग ए पी Shuvalovu गर्न belonged जो, छुट्याइयो - प्रसिद्ध गणना। यो षड्यन्त्र जवान रूखहरू भयो जहाँ टाउन, एक सानो दूरी मा स्थित छ। त्यसैले, यो क्षेत्र सुधार उद्देश्य ठूलो-मात्रा प्रिपेरेटरी काम चाहिएको छ। र उत्तरी चिहान थियो। सेन्ट पीटर्सबर्ग, समीक्षा सधैं उत्साहित छन् जो, किनभने प्रसिद्ध मान्छे को चिहानहरू छन्, जो समावेश थुप्रै आकर्षण, र यो mournful ठाउँ दावा।
burials लागि जमीन जायदाद
धेरै वर्षअघि चिहान वास्तवमा मुक्त, थियो एक जो सम्पूर्ण क्षेत्र को तेस्रो भन्दा बढी कवर धेरै अलग भागहरु, शामिल छ। यो क्षेत्रमा केही भाग लूटेराण चिहानहरू लागि अभिप्रेरित थियो विचारणीय छ। मसीही पाठ्यक्रम धेरै अनुयायीहरूलाई थाहा शहर भनेर जहाँ उत्तरी चिहान - सेन्ट पीटर्सबर्ग। प्रशासन सधैं यो सकेसम्म सहज बनाउन प्रयास, यो mournful स्थान हेरचाह गरेको छ।
म विशेष गरी जसमा घर दुई फर्श को निर्वाचकगण बनाइएको थियो, छोटो समय को लागि, चिहान Caretaker काम गरे। यो व्यक्ति इलाका को दूषण रोकन, अर्डर राख्छ। को चिहान मा स्थित मन्दिर सेवा पनि आफ्नै आवास भएको थियो। साथै, त्यहाँ अतिथि घरहरू थिए। केही newcomers यो स्थान बाट छाप अन्तर्गत मान्छे हो, पनि तिनीहरूले अन्तिम शरण उत्तर चिहान छ बन्न चाहनुहुन्छ बताए। सेन्ट पीटर्सबर्ग, फोटो जो आफ्नो सौन्दर्य संग कल्पना कब्जा, तिनीहरूलाई गर्व, त्यहाँ सधैं भन्ने सफा र सुन्दर धेरै छ र आकर्षित किनभने हुन सक्छ।
बिछाउने र मन्दिरको consecration
बिछाउने मन्दिरको चिहान 1874 को लेट गर्मी मा भयो, उहाँले धेरै चाँडै उच्च थियो, र पहिले नै प्रारम्भिक हिउँदमा यो ढाकिएको। केही वर्षपछि अर्को महत्वपूर्ण घटना भयो। एउटा सानो मण्डप जो बाहिर आदेश liturgy लगे, रोशनी थियो। प्रार्थना गर्न विश्वासी धेरै, यो उत्तर चिहान गए। सेन्ट पीटर्सबर्ग पनि यहाँ माहौल धेरै विशेष छ भव्य चर्च संग abounds, तर यो मन्दिर एक बरु असामान्य सकिन्छ।
सेवा, विशेष रेल
को चिहान काम सम्बन्ध, सबै कुरा सही थियो। फिर्ता कोठा मा तपाईं सर्किट क्षेत्र र दफन जायदाद को नम्बर हेर्न सक्छ जसमा एउटा किताब थियो। को गम्भीर साइट को स्थान मा निर्णय गर्न, साथै लिन सेवाहरू फाइदा छेद को मात्र होइन प्रावधान, तर पनि अन्त्येष्टि लागि आवश्यक बर्तन को सबै प्रकार को प्रावधान समावेश मृतक को नातेदार। तर सबै छ। पनि चिहान दफन साइट तयारी को कर्मचारीहरु द्वारा बाहिर। यो चिहान, को अन्त्येष्टि रेल मा पुग्न coffins लागि अभिप्रेरित एक विशेष कार थियो जो मृतक को नातेदार, गर्न विशेष समर्पित गर्न सक्ने उत्सुक छ। पक्कै, यो एक महान समाधान थियो। उहाँले वर्तमान छ, र शोक नातेदार लागि एक निजी कार। तिनीहरूले एक प्रेम एक कुनै थप छ भन्ने विश्वास गर्छन् चाहेनन्, तर रेल inexorably उत्तर चिहान तिनीहरूलाई चलाए। सेन्ट पीटर्सबर्ग मनोरञ्जन धेरै संग पर्यटकहरु सुन्दर आधुनिक शहर देखिन्छ, तर केवल स्थानीय उहाँले यसको इतिहास मा देखेको छ धेरै दुःख कसरी थाहा ...
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू
प्रायजसो, मानिसहरू मुक्त क्षेत्रमा गाडे थिए, त्यसैले चिहान सधैं एक हानि मा, हरेक दिन नयाँ नयाँ चिहानहरू धेरै देखियो भन्ने तथ्यलाई बावजुद छ। धेरै पछि समय यहाँ परिवर्तन भएको छ। प्रहरी र गार्ड को दफन लागि क्षेत्रको प्रबन्ध - 1887 विभिन्न regiments को सैनिकहरु को दफन, र 1903 को लागि एक विशेष साइट को रिलीज द्वारा चिन्ह लगाइएको थियो। को चिहान मा, तिनीहरूले आफ्नो अन्तिम घरबार ठाउँ र अनाथालय बाट बच्चाहरु फेला परेन। दफन ठाउँमा आफ्नो चिहानहरू मा रहन केही मानिसहरू मा नोस्टाल्जिया evokes। केही समय पछि चिहान Aleksandra Nevskogo को सम्मान मा नाम चर्च, साथै स्मृति Marii Magdaliny समर्पित मण्डप बनाइएको थियो। जो विभिन्न रोगहरु र भोक देखि मृत्यु मान्छे को ठूलो burials बाहिर गर्दा 1918-1919 वर्ष, साँच्चै भयानक थिए। दुर्घटना को अनन्त स्ट्रिङ उत्तर चिहान गर्न फैलयो। सेन्ट पीटर्सबर्ग कठिन समयमा अनुभव गरिरहेको छ।
आज उत्तर चिहान
पछिल्लो शताब्दीको 20s मा, अन्त्येष्टि यहाँ ठाउँ लिए त अक्सर छैन। को चिहान गर्न प्रमुख रेलमार्ग, विनाश भएको थियो। धारणा चर्च उपासनाको धेरै अन्य ठाउँहरूमा जस्तै भाग्य - यो हटाइएको थियो र चाँडै dismantled। मात्र ठूलो यसको आधारमा सेवा जो पत्थर, - यो सम्भव थियो केवल उहाँलाई लागि यहाँ एक पटक एक चर्च खडा गर्ने अनुमान गर्न।
आज चिहान लागू हुन्छ, र धेरै आफ्नो नातेदार को आफ्नो दफन लागि यो चयन गर्नुहोस्। केही लागि यहाँ भएको समीक्षा, द्वारा न्याय निःशुल्क छ। तपाईं खरानी संग दुवै caskets र urns मुर्दा गाड्नु गर्न सक्नुहुन्छ, तर सबै को लागि एक निश्चित रकम भुक्तानी गर्न हुनेछ। यद्यपि, यो तथ्य पनि चिहान गर्न मानिसहरूको मनोवृत्ति असर गर्दैन। जताततै फूल बढ्न इलाका, राम्रो प्रबन्ध छ, नियमित सफाई बाहिर छ, र यसैले, कुनै उजुरी त्यहाँ हुन सक्छ। सबै आदेश छ भनेर निश्चित गर्न, पर्याप्त कम्तिमा एक पटक उत्तर चिहान भ्रमण गर्नुभएको थियो। सेन्ट पीटर्सबर्ग धेरै रोचक स्थानहरू लागि प्रसिद्ध छ, आशावादी गर्न मिलाउँछ, तर यसको इतिहास को दुखद पृष्ठहरू बारेमा भूल छैन। यो अद्भुत शहर मार्फत हिड्ने किन, को चिहान हेर्न छैन?
14 तपाईं के मतलब 88 गर्छन्? त्यहाँ संख्या मा एक खतरा छ?
यहूदी नाम - प्राचीन देखि वर्तमान दिन
आफ्नो भाइ पत्नी - एक मूल व्यक्ति
को protagonist - मुख्य पात्र छ
मर्यादा संग खाने रूपमा तालिका बेहोरा र शिष्टाचार,
उत्पादन दबाब कसरी वृद्धि गर्न?
"मेदभेदेभ" क्लिनिक। क्लिनिक "मेदभेदेभ" Kupchino: फोन र समीक्षा
गोदाम - यो हुनुहुन्छ? काम विवरण storekeeper
नयाँ वर्षको लागि पोप एक उपहार पठाउन
हावा र कोमल Vergunov kefir। नुस्खा र सेवा
गार्डन बैंगनी: रोपण र हेरविचार
जहाँ नोभेम्बर मा आराम गर्न: सम्भव विकल्पहरू
विभिन्न embodiments मा नुस्खा स्पेगेटी
ककडी बिरुवाको खेती